के प्रेममा धोका पाउनु भएको छ ? यसरी बढाउनुस् हिम्मत « रिपोर्टर्स नेपाल
के प्रेममा धोका पाउनु भएको छ ? यसरी बढाउनुस् हिम्मत
एजेन्सी, १० भदौ । वास्तवमा आफुलाई अफ्ठेरो पर्दा धेरैको सहयोग पाइदैन् । यो कुरा सत्य हो । किनकि धेरै लडाई आफु एक्लै लड्नुपर्छ । बाँच्न, लड्न र एक्लै अगाडी बढ्नको लागि आफैमा शक्ति बढाउनुपर्छ । कसैलाई भरोसा नगर्नुहोस्।
१. जसले आफुृलाई माया गर्छ, उसलाई दुनियाँले माया गर्छ । जसले आफुलाई सम्मान गर्न जान्दछन्, उनीहरुलाई संसारले सम्मान गर्दछ । सम्बन्ध टुट्नुको मतलब यो हो कि उ तिम्रो लागि योग्य छैन् जसले तिमिलाई छाडेर गयो ।
२. यदि तपाइँ जीवन बुझ्न चाहानुहुन्छ भने पछाडि हेर्नुहोस् र यदि तपाइँ बाँच्न चाहानुहुन्छ भने अगाडि हेर्नुहोस्। आफु जिन्दगीमा अगाडी बढे जिन्दगी अघि बढ्छ, विगतलाई सम्झेर होइन। परिस्थिति समयसंगै परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले आफैलाई परिवर्तन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
३. ठक्कर खानुको मतलब यो होइन कि तपाइँ हिड्नु बन्द गर्नुहोस्। बरु ठक्करको मतलब यो हो कि तपाइँ अझै ठीक हुनु पर्छ। जो ढल्दै हिँड्छ उ एक बुद्धिमान र साहसी व्यक्ति हो।
५.जीवनले हामीलाई नयाँ जीवन बाँच्ने अवसर दिन्छ । सम्बन्ध टुट्नुको मतलब यो हो कि यो प्रगती गरेर आफैलाई प्रमाणित गर्ने समय हो।
६.तपाइँ मर्नु भन्दा पहिले दुई चीजहरु गरेर मर्नु पर्छ। पहिलो आफु हारेको सम्झन हुँदैन । दोस्रो मानिस कुनै रोग वा दुःखबाट मर्नु भएन् । तर, सबैले भनुन कि आफ्नो सम्पुर्ण जीवनको आनन्द लिई सकेपछि उनले संसारबाट बिदाइ भए ।